Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l1112 lak
Mankalaza an'i Kristy (2Tes.1:10-12)
Alakamisy 13 Sept.
Vakio ny 2 Tes. 1:10-12. Inona no hevitry ny hoe hankalazaina eo amin’ny olony masina i Jesôsy Kristy?
Tsipirian-javatra lehibe maromaro mikasika ny fiavian’i Kristy fanindroany no hita ao anatin’ny fehezan-teny iray manontolon’ny andalan-teny amin’ity herinandro ity (2 Tes.1:3-10). Rehefa miverina i Jesôsy, dia hamaly fahoriana ny mpampahory ary hanome fitsaharana ho an’ny ampahorina kosa (jereo ny 2 Tes. 1:6,7). Hidina avy any an-danitra Izy miaraka amin’ny anjelin’ny heriny (2 Tes. 1:7). Amin’ny afo midedadeda no hiaviany hitondra fitsarana eo amin’ireo nandà an’Andriamanitra sy ny filazantsaran’i Jesôsy Kristy (2 Tes. 1:8). Ho very mandrakizay ny ratsy fanahy (2 Tes. 1:8,9) ary ny marina kosa hankalaza an’i Kristy (2 Tes. 1:10).
Ireo toe-javatra hiseho amin’ny Fiavian’i Kristy fanindroany no manomana ho amin’ny arivo taona, fotoana izay hahafoana ny tany mandritra izany fe-potoana izany (Apôk.20:1-6). Na dia tsy mitantara amintsika izay hitranga amin’ny olona marina aza ny andalan-teny amin’ity herinandro ity, ny 1 Tes. 4:16,17 kosa dia milaza amintsika fa hitsena an’i Jesôsy eny amin’ny habakabaka amin’ny fiverenany ny voaavotra. Voalazan’ny Jao. 14:1-3 ihany koa fa horaisin’i Jesôsy ho any Aminy any an-danitra ny marina.
Ahoana no fomba fananaran’i Paoly ny mpino mba hiomana ho amin’ny fiavian’i Jesôsy fanindroany? 2 Tes. 1:11.
Faranan’i Paoly ao amin’ny and. 10 ny firesahana mikasika ny ratsy fanahy ka mitodika amin’izay ho anjaran’ny marina amin’ny Fiavian’i Kristy fanindroany indray izy. Ao amin’ny and. 10-12, ny voninahitr’i Jesôsy dia miharihary eo amin’ny toetr’ireo izay mino Azy. Faly i Paoly fa ho voamarina amin’ny fiverenan’i Jesôsy ny fivavahana sy ny ezaka nataony ho an’ny Tesalônianina (jereo 1 Tes. 2:19,20).
Manomana sahady ho amin’ny toko 2 i Paoly eto, izay anantitranterany ny tsy mbola hiavian’ny andron’ny Tompo tamin’izany fotoana izany. Raha ho avy izany, dia hisy afo midedadeda handrava ny ratsy fanahy ary i Jesôsy kosa hankalazaina eo imason’ny rehetra.
Ao amin’ny andalan-tenintsika androany i Paoly, dia miala mora foana amin’ny firesahany momba an’Andriamanitra ka mankamin’i Jesôsy, ary ovaovainy hatrany izany. Araka ny voalazan’ny Soratra Masina, dia Andriamanitra i Jesôsy. Tena ilaintsika indrindra io fampianarana io. Arakaraka ny maha-lehibe an’i Jesôsy no vao mainka koa mampanan-kery ny famonjeny ary mampahazava kokoa ihany koa ny endrik’Andriamanitra voaraintsika, rehefa mibanjina ny fiainany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin’ny maty sy ny fiaviany fanindroany isika. Raha tena Andriamanitra marina i Jesôsy, dia tsy isalasalana ny fitovian’ny Ray Aminy.
Ahoana no ianarantsika manohy ireo asa aman-draharaha eo amin’ny fiainantsika isan’andro, kanefa mandritra izany koa dia miandrandra ny Fiavian’i Kristy fanindroany? Nahoana no mora tokoa ny manadino izany Fiverenany izany, eo anivon’ireo rotorotom-piainana isan’andro? Ahoana àry no ianarantsika mihazona izany teny fikasana mahatalanjona izany eo am-panatontosana ny asa amandraharaha isan’andro, sady manokana fotoana ihany koa handinihana lalina sy amim-pamatorana izany teny fikasana izany?